New High torque 16DCT Athlonix ™ Mini Motor - China Shandong Better Motor
Portescap wazisa 16DCT motor entsha torque layo eliphezulu DCT uluhlu Athlonix Motors. I 16DCT motor unako ukuhlangula gqolo torque ukuya ku 5.24 mNm kwindawo ubude 26mm kuphela.
I 16DCT isebenzisa iimagnethi Neodymium enamandla namandla obuvunyiweyo uyilo coreless kakuhle Portescap kaThixo. I-coil self-inkxaso elungiselelwe kuqinisekisa ukusebenza eliphezulu lowo ulithethayo iphakheji compact, ukunciphisa iindleko zizonke zobumnini. Kuthelekiswa Motors ezifanayo kwindawo zorhwebo, i 16DCT na ummiselo motor lisezantsi (R / K2) nto leyo ethetha ukuba has ukuhla esezantsi isantya wokuwalayisha ekwandiseni. Oku kunika injini enamandla ezikhoyo onazo yakho iimfuno ezahlukeneyo isicelo esicela umngeni. Lo msebenzi osemqoka, kudityaniswe ngempumelelo ukuya kwi-85%, yenza injini 16DCT isisombululo motion efanelekileyo ibhetri ezisebenza izixhobo.
16DCT ifumaneka zesinyithi ezixabisekileyo neenkqubo grafayithi commutation kwaye ezilungele izicelo ezifana zonyango kunye noshishino iimpompo, iinkqubo zokuhanjiswa kweziyobisi, iinkqubo zithwala (iminwe obulawulwa), izixhobo amandla ezoshishino ezincinane, oomatshini umvambo, imipu mesotherapy, izixhobo zamazinyo, ubukele winders, kunye grippers mveliso. Ezinye izicelo kuquka ukhuseleko kunye nokufikelela kunye iirobhothi irobhothi kungaba avelele ngokusebenzisa motor 16DCT Athlonix.